Yangon School Of Interior Design - Architectural and Interior Magazine
Python World by Khin Bo Bo Oo
Art In Clay Museum & Clay Creative Institute by Phyo Kyaw Kyaw (Chase)
Myanmar Marionette Theater & Institute by Phyo Yadanar Toe
How the Ideology effect Arts
မီ (သို့) ပုစ္ဆာဆန်သောမိန်းကလေး
လူသည် မျောက်မှဆင်းသက်လာသည်ဟု ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်သီအိုရီဖြင့် ချာလ်ဒါဝင်မှ သက်သေပြ ဖွင့်ဆိုခဲ့သည်။ ထို့အတူ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ဘာသာတရားအသီးသီးတွင်ကမ္ဘာဦးစ လူသားဖြစ်တည်လာပုံကို အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံ ဖွင့်ဆို ကြလေသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်တည်လာစေကာမှုသေချာသည်မှာ ကမ္ဘာဦးလူသားမျိုးနွယ်များသည် ယဉ်ကျေးမှု မထွန်းကား သေးသော လူရိုင်းသက်သက်မျှသာဖြစ်တန်ရာ၏။ ထိုမှတဆင့် လူသားတို့၏ တီထွင်ကြံဆတတ်မှု၊ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ဆက်သွယ်သည့်ဘာသာစကားများ ဖန်တီးလာနိုင်မှု၊ စသည့်ဖြင့် လူသားတို့၏ အသိဉာဏ်သည်လည်း….
Creative Writing January 6, 2017
ပြင်သစ်ရိုးရာဒဏ္ဍာရီပုံပြင်တစ်ပုဒ်ကို လူသက်ရှိသရုပ်ဆောင်များဖြင့် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတစ်ကားအနေနဲ့ အသက်သွင်းထားသည်ကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်အတိ။ ထင်ရှားအောင်မြင်လှသည့် ပုံပြင်ဖြစ်ခဲ့ သကဲ့သို့ သက်ဝင်လှုပ်ရှားရုပ်ရှင်မှာလည်း အောင်မြင်မှုများစွာ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရခဲ့သည်။ ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာကလည်းရုပ်ရှင်တစ်ကားလုံးကို အရောင်များ ရက်ရောဆန်းကြယ်စွာ ပုံဖေါ်ထားသည်မှာ အပြစ်ပြောဖွယ်ရာမတွေ့။ ပြည့်စုံလွန်းလှသည်။ ၎င်းရုပ်ရှင်ကားမှ နှစ်သက်ရာ ဇာတ်ဝင်ခန်းတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီး projectအနေနှင့် အသက်သွင်းရန် ကြိုးပမ်းသည့်အခါ တွေဝေမှု ၊…
Design Studio January 6, 2017
Python World ၏ အဓိပ္ပါယ်မှာ တိုက်ရိုက်ဆိုရသော် စပါးအုံးကမ္ဘာ ဖြြစ်ပီး ကမ္ဘာ ဟုဆိုရခြင်းမှာစပါးအုံးများ၏ အသုံးဝင်ပုံများ ၊ အသွင်အပြင်များ ၊ သဘာဝဖြစ်ရပ်ဆန်းများ များ စသည်တို့အား တစ်နေရာတည်းတွင် ကမ္ဘာ တစ်လုံးကဲ့သို့ပင် စုစည်းထားသော Space တစ်ခုဖြစ်နေခြင်းကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်တိရတ္ဆန်ရုံ တွင်…
Design Studio January 5, 2017
A space for entertaining the mind and head,asense of keeping visitors longer with dramatic and modern design integrating with old heritage building.…
Yoke The’ is the Burmese name for marionette puppetry. Like most of Burmese Refined art, Yoke the’ performances originated from royal patronage and were…
Creative Writing January 5, 2017
၁။ မီ (သို့) ခရမ်းရောင်နေဝင်ချိန် မီ….ဆိုသည်မှာ ဇာတ်လမ်း၏ အဓိကဇာတ်ကောင်ဖြစ်သော မိန်းကလေး၏ နာမည်ဖြစ်သည်။ ထိုနာမည်လေးသည်လှသည်။ပျော့ပျောင်း နွဲ့နှောင်းကာနှစ်လိုဖွယ် ရှိသောသဘောကိုဆောင်သည်။သို့သော် အနက်အဓိပ္ပါယ်ကိုမူ အတိအကျ နားမလည်နိုင်။ မီ သည် စာရေးသူနှစ်သက်သောခရမ်းရောင်နေဝင်ချိန်နှင့် တူသည်။အရောင်မျိုးစုံကြားတွင် ခရမ်းရောင်သိသာစွာကွန့်မြူးကာ လှပနေသောကောင်းကင်ကြီးသည်စွဲမက်ဖွယ် ကောင်းသည်။ဆန်း ကြယ်သည်။ သူ့…
Projects December 9, 2016
Jean Prouve’ သည် ၁၉၀၁ခုနှစ် ဧပြီလ ၈ရက်နေ့တွင် ပြင်သစ်နိုင်ငံပဲရစ်မြို့တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ မွေးချင်း၇ယောက်ရှိသည့် အနက် ဒုတိယမြောက်သားဖြစ်သည်။ မိဖများမှာ Victor Prouve’ နှင့် Marie Duhamel တို့ဖြစ်ကြသည်။ သူသည်အနုပညာမျိုးရိုးမှ ဆင်းသက်လာသူဖြစ်သည်။ Prouve’သည်ဖခင်၏ အနုပညာအမွေကိုဆက်ခံခဲ့သောသား တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူသည်စက်မှု့လုပ်ငန်းများနှင့်…
Projects May 15, 2016
Frank Gehry Architect Frank Gehry သည်အမေရိကန်နိုင်ငံ လော့စ်အိန်ဂျလီတွင်နေထိုင်သော ကနေဒါ လူမျိူးတစ်ယောက် ဖြစ်သည်။သူတည်ဆောက်ခဲ့သော အဆောက်အဦးများနှင့် သူ၏ ကိုယ်ပိုင် အဆောက်အဦးမှာ ကမ္ဘာ့ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံး အဆောက်အဦးများဖြစ်လာခဲ့သည်။ Gehry ခေါ် Frank Owen Goldberg ကို Feb 28,…
Get the best from Yangon School Of Interior Design, straight to your inbox.
Yangon, School of Interior Design was founded by Ko Aung Soe Paing (Dip in ID, LASALLE_SIA) and Ko Kyaw Moe Wai (Dip in ID, BCA Academy).
Copyright © 2016 YSID. All rights reserved. Site by Newmen.